University of Zimbabwe launches first ever Shona-Chinese dictionary - NewZimbabwe.com University of Zimbabwe launches first ever Shona-Chinese dictionary - NewZimbabwe.com
THE University of Zimbabwe on Friday launched the first ever Chinese- Shona dictionary alongside five other books as the country’s oldest institution of higher learning moves to advance intercultural exchanges between people of the two nations.
The “Shona-Chinese-Chinese-Shona Dictionary” was produced by the Confucius Institute (CI) in collaboration with the Department of Linguistics at the university.
“The tendency has been to emphasize us learning Chinese without paying attention to the Chinese themselves learning our local languages and so because of the amount of investment and amount of interaction that is taking place between us and the Chinese, it will be productive and wise for them to start learning local languages and Shona being the major languages in Zimbabwe this dictionary will act as a vehicle for promoting that cultural exchange,” he said.
“We want to promote this important interaction between the two cultures and there is nothing better than focusing on the vehicle that carries the culture of a people and this is the language,” Nyagura said.
The director of higher education programs in the Ministry of Higher and Tertiary Education Martha Muguti said the dictionary was a catalyst that bridges the gap between China and Zimbabwe.Advertisement
“The history of the Sino-Zimbabwe political and economic ties would not be complete without the peoples of these great countries reaching deeper into their recesses of each other’s cultures that are deeply embedded in these countries’ common languages,” she said.
One of the editors of the dictionary, Herbert Mushangwe, said the dictionary will not only help ordinary people but business people and others in various sectors of Zimbabwe’s economy to interact with their Chinese counterparts.